I-Scrap Metal Baler, I-Vertical Non-Metal Baler, Umshini Wokucindezela Wensimbi Wensimbi - Hlanganisa phezulu
IHydraulic Scrap Metal Press Aluminium Baler Machine
I-Y81 Series hydraulic metal baler enesakhiwo esivaliwe esivaliwe, amapuleti okugqokwa anamandla aphezulu kanye nesembozo somnyango esinama-blades okusika, esingagunda izinsalela ezinkulu zibe zincane kanye nokuzuza ukuminyana kuqala. Umshini ngamunye ungalawulwa ngesandla noma ngokuzenzakalelayo.
Inombolo Yemodeli: Ukulawula Okuzenzakalelayo Kwe-Chinese Manufacture...
Ngaphezu kweminyaka engama-25+ yokukhiqiza...
Inombolo Yemodeli: I-Chinese Manufacture Q91Y Series Hydra...
Inombolo Yemodeli: Imanuwali Yokukhiqiza YaseShayina Q4...
Inombolo Yemodeli: Imanuwali Yokukhiqiza YaseShayina Y8...
Inombolo yemodeli: I-CBJ Series hydraulic scrap bale breake...
Inombolo yemodeli: I-NY Series hydraulic hot spinning closi...
I-Jiangyin Unite Top Heavy Industry Co.Ltd. yinkampani yaseShayina ebambe iqhaza ekwakhiweni nasekukhiqizeni imishini yokugaywa kabusha kwensimbi. yasungulwa ngo-2004 futhi sandise isikali sokukhiqiza futhi sithuthela epaki yezimboni ngo-2012. siseduze ne-SHANGHAI, ngezokuthutha ezilula kakhulu. ungumkhiqizi ochwepheshe wemishini esebenza ngogesi. Njengamanje, seyakhe uchungechunge lwezinsimbi ezilahliwe, i-shear, i-shear yokupakisha imoto, ukuchotshozwa kwensimbi ye-scrap nokunye. Yonke imishini yokugaywa kabusha ikhiqizwa isuka ekuklanyweni iye ekukhiqizweni ngokuhambisana namazinga aqinile okusebenza kanye nokusetshenziswa kwabahlinzeki bezingxenye abazinzile nabaqeqeshiwe.
1. Ukulimala kwezinga lokushisa eliphezulu likawoyela ohlelweni lokusebenza lwe-hydraulic metal baler. Izinga lokushisa eliphezulu likawoyela lizosheshisa ukuguga noma ukuwohloka kwezigxivizo zenjoloba namapayipi ohlelweni lokusebenza lwe-hydraulic metal baler, kuthinte impilo yabo yesevisi, ngisho nokulahlekelwa umsebenzi wabo wokuvala...
Yiziphi izinhlobo eziyinhloko zamabhali ensimbi angcolile emakethe? Kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko ezivamile, okungukuthi, i-Vertical manual packer, i-Horizontal manual packer, i-Horizontal automatic packer. Ungayithenga kanjani i-waste metal compactor esiteshini sokupakisha? Ivolumu yakho, okungukuthi, cabanga ...
Ngenxa yemithombo yamaminerali elinganiselwe futhi engavuseleleki, ngokuthuthuka okuqhubekayo kwabantu, lezi zinsiza ziyancipha njalo, ukushoda kwezinsiza nakanjani kube isimo abantu okudingeka babhekane naso ngokuqondile. Isimo sokushintshwa kwakudala nokusha...
Umshini awunawo ukudlidliza okubalulekile lapho usebenza, ngakho-ke asikho isidingo esikhethekile sesisekelo. Abasebenzisi bangabeka umshini endlini futhi bathele ukhonkolo ojwayelekile phansi ngokwemibandela ethile. Kuhlelo lokufaka, umsingathi kufanele abekwe kuqala...
Ukuwohloka kwebhali yensimbi ye-hydraulic kanye nenqubo yokunquma uhlelo lokulungisa. Hlaziya izimbangela ezingenzeka zephutha ngokusekelwe esibonakalisweni sephutha futhi uqede izimbangela ngamunye ngamunye kuze kutholakale imbangela yokugcina yephutha. Ingaqinisekiswa...
I-Y81 Hydraulic Baler, I-Pop-Top Can Baler Equipment, I-Scrap Metal Compactor, I-Leaf Compactor kanye ne-Baler, Umshini we-Aluminium Foil Baler, I-Cardboard Baler eyenziwe ekhaya,